कुनै पनि सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली | मा स्थान सम्पादन गर्नुहोस् Martech Zone
आइतवार, नोभेम्बर 25, 2012 सोमबार, नोभेम्बर 26, 2012 Douglas Karr
२०० In मा म विकासकर्ताहरूलाई अपनाउनको लागि दबाब दिँदै थिएँ सम्पादन ठाउँमा प्रविधिहरू ... र ती थिएनन्। छ वर्ष पछि र म अझै मेरो टाउको कोरेर गर्दैछु कि कसैले पनि एक महान् सामग्री व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गरेर विकसित गरेका छैनन् सम्पादन ठाउँमा प्रविधिहरू।
यो देखिन्छ कपबार समाधान गर्दैछ सम्पादन ठाउँमा एक विश्वव्यापी एकीकृत सेवा निर्माण गरेर सबैका लागि कन्ड्रम। कपीबारले धेरै सामग्री प्रबन्धन प्रणाली द्वारा प्रस्ताव गरिएको एपिआइहरू प्रयोग गर्दछ र तपाईंलाई साइटमा सम्पादन गर्न सरल साधन प्रदान गर्दछ, चाहे तपाईं शॉपिफाई वा वर्डप्रेस प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले पनि आफ्नै प्रस्ताव एपीआई ताकि अन्य सामग्री प्रबंधन प्रणाली प्रदायकहरु सजीलै आफ्नो टूलसेट एकीकृत गर्न सक्दछन्।
प्रतिलिपिबार स्थापना र कन्फिगर गर्न
तपाईंको कपीबार स्निपेट प्रतिलिपि गर्नुहोस् - प्रत्येक कपीबार स्निपेटले तपाइँको खाता नाम र एक अद्वितीय तत्व नाम फिचर गर्दछ। यसलाई हातैले टाइप गर्नुहोस्, हाम्रो अद्भुत प्रयोग गर्नुहोस् कपबार स्निपेट जेनरेटर.
तपाइँ यसलाई चाहानुहुन्छ जहाँ टाँस्नुहोस् - तपाई HTML लाई प्रविष्ट गर्न सक्नुहुने जहाँसुकै पनि कपीबार तत्व राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको वेबहोस्टमा एक HTML फाईल। मा तपाइँको WordPress सम्पादकमा दृश्य टम्बलर वा शॉपिफाइका लागि विषयवस्तु सेटि Inहरूमा। तपाइँ तपाइँको कपबार तत्वहरूमा कत्तिको रचनात्मक हुनेछ?
'प्रतिलिपि थप्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस् - तपाईंको पृष्ठ लोड गर्नुहोस् (यो सर्वरको साथ प्रत्यक्ष हुनु आवश्यक छ)। नयाँ 'प्रतिलिपि थप्नुहोस्' बटन क्लिक गर्नुहोस्, तपाईंको काम गर्नुहोस्, र त्यसपछि 'बचत गर्नुहोस्' क्लिक गर्नुहोस्। तपाईको प्रतिलिपिबार तत्त्व तपाईको पृष्ठको मूल भाग जस्तो देखिन्छ, तर तपाई यसलाई लाइभ सम्पादन गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँ सहयोगीहरू थप्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरूले पनि यसलाई सम्पादन गर्न सक्दछन्।
प्रतिलिपिबार वास्तविक उपकरणपट्टी मात्र होईन, तपाईंको लागि दृश्यहरूको पछाडि सम्पूर्ण प्रशासकीय ईन्टरफेस उपलब्ध छ। कपीबारसँग एक सहज वेब अनुप्रयोगबाट तपाईको सबै प्रतिलिपी तत्वहरू प्रबन्ध गर्न उपकरणहरू छन्। तपाईं आफ्नो प्रतिलिपिबार तत्त्वहरूको प्रत्येक ट्र्याक गर्न सक्नुहुनेछ, जहाँ तिनीहरू देखा पर्दछन्, र अरू कसले उनीहरूसँग सहयोग गर्दै छ।
मूल्य निर्धारण अद्भुत छ, असीमित तत्वहरू, असीमित सहयोगीहरू र प्रतिलिपिबार ब्याजलाई खोल्न र बन्द गर्नको लागि प्रति महिना केवल 4.95 $।
टैग: copybarसम्पादन ठाउँमाशॉपिफाईWordPress
स्लाइडडग: निर्बाध फाईलहरू
यो साझा गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यबाद। यो ठूलो सहयोग हो। राम्रो काम!